नर्मल र अप्रेसन गरेर बच्चा जन्माउदाका फाइदा बेफाइदा यस्ता छन् … (भिडियो सहित) | Ishan Bal Hospital, Kathmandu isamulti-specialty hospital that offers preventive and curative healthcare services. नर्मल र अप्रेसन गरेर बच्चा जन्माउदाका फाइदा बेफाइदा यस्ता छन् … (भिडियो सहित) - Ishan Bal Hospital, Kathmandu isamulti-specialty hospital that offers preventive and curative healthcare services.
01-4354537 , 4-381962 ,4-380584 ,4-359560 (24/7 emergency service)
नर्मल र अप्रेसन गरेर बच्चा जन्माउदाका फाइदा बेफाइदा यस्ता छन् … (भिडियो सहित)
केही वर्ष अघिदेखि नेपालमा सुत्केरी गराउँदा सिजरियन सेक्सन वा सल्यक्रिया गरेर बच्चा जन्माउने प्रचलन बढेको पाइन्छ । किन सामान्य सुत्केरीको सट्टा अप्रेसन गरेर बच्चा निकाल्ने प्रवृति बड्दै छ र सामान्य सुत्केरी र अप्रेसन गरेर बच्चा जन्माउदाका फाइदा बेफाइदाका बारेमा अंकुरण खबरका लागि ईशान बाल तथा महिला अस्पतालमा कार्यरत स्त्री तथा प्रसुतिरोग विशेषज्ञ डा. आशा सिंह यसो भन्छिन् …
सामान्य तया सुत्केरी २ विधिबाट गराइन्छ
१.सामान्य सुत्केरी ।
२.अप्रेसन वा सल्यक्रिया गरेर बच्चा निकाल्ने ।
नेपालमा केही वर्ष अघिसम्म पनि अप्रेसन गरेर बच्चा जन्माउने प्रचलन निकै नै कम थियो । तर पछिल्लो समय भने धेरै गर्भवतीको रोजाई बन्छ अप्रेसन गरेर बच्चा जन्माउने । सामान्य र अप्रेसन गरेर बच्चा जन्माउने दुबै विधिका आ−आफ्नै फाइदा बेफाईदा छन् । गर्भवती र गर्भमा रहेको शिशुको अबस्था आदिको कारणले कस्तो तरिकाले बच्चा जन्माउने भन्ने कुराको निर्धारण गर्छ ।
सामान्य सुत्केरी गराउने अबस्था :
हामी जहिले पनि प्रकृतिको नियमसंगै चल्नुपर्छ । प्रकृतिक नियमसंगै हामी समायोजन हुन सक्यो भने हामीलाई दीर्घकालसम्म धेरै फाइदा हुन्छ । तर जब मानिस प्रकृतिको नियम विपरित कार्यहरु गर्छ वा प्रकृतिलाई आफ्नो हातमा लिन खोज्छ तब त्यँहा क्षणिक राम्रो भए पनि पछि भने केही न केही असर देखिन्छ । सुत्केरी हुने कुरा पनि त्यही हो । सामान्य सुत्केरी प्राकृतिक र परम्परागत विधि हो । यो विधि अनुसार शरीरले सुत्केरी हुने अवश्यक वातावरण सृजना गर्दै पाठेघर खुल्ने र बच्चा जन्मिदाको पीडा आमामा महशुस गराउँछ । यसरी जन्मेका बच्चाहरुमा रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता पनि बढी हुन्छ ।
यस विधिका फाइदा :
सामान्य सुत्केरीहुँदा कृत्रिम घाउ हुँदैन । आमा बन्ने क्रममा प्रसब पीडा भए पनि प्रसब पछि पीडा कम हुन्छ ।आमाले बच्चालाई लगत्तै आफ्नो दुध खुवाउन सक्छन् । जुन बच्चाको लागि अमृत सरह हुन्छ । आमा र बच्चाबीचको सम्बन्ध झन घनिष्ठ गराउँछ । तुरुन्तै एकले अर्काको स्पर्श पाउँछन् । थोरै रगत जान्छ । यसमा कुनै भित्रि अङमा क्षति पुग्ने डर हुँदैन । अस्पतालमा धेरै समय बस्नु पर्दैन । तर, यति हुँदाहुदै पनि यस विधिका केही बेफाइदा भने पक्कै छन् ।
कहिलेकाँहि धेरै रगत जाने संभावना रहन्छ । कतिपय अबस्थामा आमा र शिशुको स्वास्थ्यमै समेत खतरा पुग्ने हुन्छ । कहिलेकाँहि लामो समय सुत्केरी व्याथा लाग्दा बच्चा च्यापिएर अक्सिजनको कमी हुने बच्चालाई ब्रुजेल लाग्ने,बच्चाले दिसा खाने डर हुन्छ । महिलामा पछि गएर आंङ खस्ने समस्या पनि देखिनसक्छ । जबरजस्ती साल तान्दा पाठेघर फर्कीन पनि सक्छ । यस्तो अबस्थामा आमाको ज्यानै जाने सम्भावना पनि हुन्छ ।
बढ्दो प्रविधिको विकाससंगै अप्रेसन गरेर बच्चा जन्माउने विधि पनि नराम्रो होइन् । पहिले पहिले अप्रेसनको सुविधा नभएकै कारण धेरै गर्भवतीको ज्याननै जाने गर्दथो । तर अहिले यस्तो घटना न्यून छ । पहिलेको तुलानामा अहिले अप्रेसन गरेर बच्चा जन्माउन सहज पनि छ ।
समय पुगि सकेको अबस्थामा आमाको पेट चिरेर बच्चा निकाल्नुलाई अप्रेसन गरेर बच्चा जन्माउने भनिन्छ । अप्रेसन गर्दा पनि पूर्व योजना अनुसार वा आकस्मिक रुपमा अप्रेसन गरेर बच्चा निकालिन्छ ।
गर्भमा भएको शिशुलाई अप्ठयारो परेको खण्डमा या आमालाई अप्ठ्यारो परेको खण्डमा ,शिशुको मुटुको धड्कन कम वा बढी हुँदा, तौल धेरै हुँदा, प्रसवको समय चाहिने भन्दा बढी भएमा, आमालाई गाह्रो पर्दा वा कुनै जटिल रोग हुँदा आसस्मिक अप्रेसन गरिन्छ ।
यसका विधिका फाइदा :
यसरी बच्चा जन्माउदा आमा र बच्चा दुबैलाई खतरा हुने संभावना कम हुन्छ । गर्भवतीमा प्रसव पीडा कम हुन्छ ।
शल्यक्रिया गरी शिशु निकाल्दा संक्रमण हुने, धेरै रगत जाने, औषधिको एलर्जी हुने, भित्रि अंगमा चोट लाग्ने र बेहोश बनाउँदा समस्या देखिन सक्छ । बढी सयम अस्पताल बस्नुपर्ने हुन्छ । शल्यक्रिया गरेको घाउ निको हुन समय लाग्छ ।
कतिपयमा सामान्य सुत्केरी हुँदा यौन आनन्दमा कमी आउँछ । सुन्दरतामा कमी आउँछ भन्ने भ्रम पनि छ । तर त्यसो हैन् । बच्चा जन्मे पछि केहि समयमा यौनाङ पूर्णत पहिलेकै रुपमा आउँछ।
सकेसम्म समामान्य सुत्केरी गराउन नै जोड दिनुपर्छ । तर यदि स्वास्थको कारणले पनि सल्यक्रिया गनुपर्ने अवस्था आयो भने शल्यक्रियापछि सोही अनुरुपको खानपान र हेरचाहाले मात्र आमालाई छिट्टै सन्चो बनाउँछ । अन्यथा सुत्केरी तंग्रिन धेरै समय लाग्ने गर्छ ।
लिम्फोमाका बारेमा अझै पनि धेरै मानिस अनविज्ञ रहेको पाइन्छ । पछिल्लो समय बच्चाहरुमा लिम्फोमा रोग बढी देखिन थालेको छ । लिम्फोमा गम्भीर प्रकृतिको रोग भएकाले
Copyright © 2020 All Right Reserved. Designed And Developed by Theme Nepal
Quick Enquiry Get an Appointment